မြရွက်ဝေ: Tokyo Disneyland
ဘလော့လေး ဖုန်တက်နေလို့ ခါရင်း နှာချေသွားတာ။ ပစ်ထားမိတာကြာပေါ့ ဘလော့လေးရေ။ လာလည်သူတွေကိုလဲ တာဝန်မကျေမိဘူး။ "တောင်းပန်ပါတယ်၊ စူမိမစဲန်း၊ ဂေါ့မဲန်းနာစအိ။" ပျောက်နေရကြောင်း ဆင်ခြေကန်ရရင်တော့ ကျန်းမာရေးပေါ့။ တစ်ရက်လေးလျှောက်လည်ပြီး လူလဲ မထူနိုင်မထောင်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ကူးထဲတော့ စာတွေရေးနေတာ အများကြီးဘဲ။ တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင် မူးပြီးအာရုံစိုက်လို့မရဘူး။ ဒီနေ့မှ အခြေအနေ သိပ်မဆိုးတော့တာနဲ့ စာပြန်တင်ဖြစ်တော့တယ်။ လာလည်သူတွေကို စာအကြွေးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ Tokyo Disneyland ပို့ပေးပါမယ်။
Tokyo Disneyland သွားဖို့ ချိန်နေတာကြာပြီ။ အိမ်ကြီးရှင် ခွင့်ယူဖို့ အဆင်ပြေမယ့်ရက်နဲ့ ရာသီဥတုသာယာမယ့်ရက်ကို တွက်နေရတယ်။ ကြားရက်သွားရတာက ပိတ်ရက်တွေဆိုလူတွေအရမ်းများတယ်၊ ဘာမှသိပ်စီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့။ ဒါတောင် အဝင်ဝမှာ တန်းစီနေတဲ့ လူအတန်းကြီးက သောင်းချီအောင်ရှိတယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆို သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လောက်တယ်။ Disneyland ဝင်ခက လူကြီးတစ်ယောက်ကို ယန်း၅၈၀၀ပါ။ တနေကုန် ကြိုက်ရာစီးလို့ရတယ်။
"မနက်၉နာရီ ဂိတ်ဖွင့်ပြီး Disneyland ထဲ တန်းစီဝင်နေတဲ့သူတွေ"
"ဒီပန်းခြံအဝိုင်းထဲမှာ စင်ဒရဲလားပုံပြင် ဖန်ရုပ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ညဘက်ဆို မီးရောင်အမျိုးမျိုးလင်းပြီး တီးလုံးသံတွေနဲ့ အရမ်းလှတယ်။"
"ဒါက အဲဒီထဲက ဖန်ရုပ်တစ်ပုံ"
"ဝင်ပြီးချင်း ဒါကြီးသွားစီးတာ၊ ပြန်ဆင်းလာတော့ မသောက်ဘဲ မူးချင်လာတယ်"
"ဂွီဂွီဂေါ်ဂေါ် သံစုံမြည်နေတဲ့ ရေပန်း"
"ဒီသင်္ဘောက ဘယ်Disneyland ကာတွန်းမှာပါလဲတော့ မသိဘူး"
"ရိုလာကိုစတာက သေးတော့ သိပ်မကြောက်ပါဘူး"
"ဒီအကောင်လေးတွေရဲ့ အိမ်ထဲလဲ ဝင်ခဲ့တယ်"
"ပုံးအဖုံးတွေလှပ်ရင် အသံတွေ ထွက်တယ်"
"အောက်ခြေနားက လေထိုးတံလိုဟာကို ထိုးရင် အပေါ်ကနေ မီးခိုးတွေ၊ မီးရောင်တွေနဲ့ ဆူညံသံတွေ ထွက်လာတယ်"
"Little World ထဲက အရုပ်လေးတွေက ချစ်စရာလေး"
"ဒီလည်နေတဲ့ခွက်ကို စီးပြီးတော့ လူကလုံးဝ မထူနိုင်အောင် မူးတော့တာဘဲ။ ခွက်က သူ့ဘာသာ လည်ပြီးသားကို ကိုယ်တော်ချောက ခွက်အလည်က စတီယာတိုင်လိုဟာကို လှည့်တော့ မဟားဒယားတွေလည်ပြီး ပြန်အဆင်းမှာ ခွေယိုင်ပြီး ဘာမှ မကြည့်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာ၊ ဆန်ပြုတ်မချက်မိအောင် (စားထားတာတွေ ပြန်မထွက်အောင်) မနဲထိန်းနေရတယ်"
"Merrygrow Round က ကလေးတွေနဲ့ အမေတွေ တွဲစီးတာများလို့ မစီးတော့ဘူး၊ အမှန်တော့ မူးနေလို့ စိတ်ထဲမှာ အိမ်ကအိပ်ယာထဲ ပစ်အိပ်ချင်စိတ်ဘဲ ရှိတော့တာ"
"Hanted Mansion ရှေ့"
"နောက်ကပုံကိုရိုက်တာ ဂျပန်မမတစ်ယောက်ပါ ပါသွားတယ်"
"Splash Mountainထဲဝင်ဖို့ fastpassကို မသိလိုက်တာကြောင့်ရော တစ်နာရီကျော်အောင် တန်းစီလိုက်ရတာ စိတ်ကိုကုန်ရော။ အထဲမှာတော့ အတော်ကြည့်လို့ လှတယ်။ လှေက တလှုပ်လှုပ်သွားနေတော့ ဘယ်လိုမှ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူး။"
"Splash Mountain ထိပ်က လျှောကျတော့ ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့၊ တပ်ထားတဲ့ ကြွက်နားရွက်ဘီးကုပ် ကျွတ်သွားလို့ အမြန်ပြန်ဖမ်းကိုင်လိုက်ရတယ်"
"ကြားရက်မှာတောင် လူတွေ လူတွေ ဟောဒီလောက်ရှိတယ်"
ချာချာလည်တဲ့ခွက်စီးပြီး မူးတာက တော်ရုံနဲ့အရှိန်မသေဘူး။ Splash Mountain ကိုတန်းစီရတာလဲ အကြာကြီးဆိုတော့ ခြေထောက်တွေလဲ တောင့်နေပြီ။ တော်တော်ကို နုံးချိနေတာ။ နောက်လျှောက်ရင်းနဲ့ ကနူးလှေရှိတဲ့ဘက်ကို ရောက်သွားတယ်။ ကနူးလှေလှော်ရတာ ပျော်စရာကြီး။ တစ်ယောက်ကို လှော်တက်တစ်တက်နဲ့ အားနဲ့မာန်နဲ့ "အိချိ-နိ (တစ်-နှစ်)" ဆိုပြီးလှော်လိုက်ရတာ ကန်ရေပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေအေးအေးကလဲ စိတ်ကို လန်းစေတယ်။ လမ်းတဝက်မှာနားပြီး ဘေးကမြင်ကွင်းတွေကြည့်ရတယ်။ ကမ်းပေါ်မှာ လူရိုင်းအဖွဲ့စခန်းတွေ၊ မီးလောင်နေတဲ့တဲတွေ၊ ဆတ်အုပ်တွေရဲ့ အရုပ်တွေ လှုပ်နေတာ အတော်ကြည့်ကောင်းတယ်။ လှေပေါ်ကဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူး။ လှေလှော်ပြီးတော့ စိတ်အတော်လန်းပြီး ခေါင်းပြန်ကြည်လာတယ်။ နှစ်ခါလောက်ပြန်လှော်ချင်တာ အိမ်ကြီးရှင်က လှေမှောက်မှာ(မဖြစ်နိုင်တာကို) ကြောက်နေတာနဲ့ သုံးထပ်သင်္ဘောဘဲ သွားစီးဖြစ်တော့တယ်။
"Toy Story ထဲက အရုပ်။ အရုပ်တွေနဲ့ တွဲရိုက်ဖို့ကလဲ တန်းစီစောင့်ရတော့ သိပ်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး"
"မမတွေ ကပြနေတာ အတူလိုက်ကလို့ ရတယ်"
အိမ်ကြီးရှင်မောင်းတဲ့ကားလဲ စီးခဲ့သေးတယ်။ ဘေးကအတူထွက်တဲ့ကားနဲ့ ပြိုင်လိုက်သေးတယ်။ ကားကအလယ်က သံလမ်းအတိုင်း သူ့ဘာသာ ပုံမှန်သွားပေမယ့် အကွေ့တွေမှာ ကိုယ်ကလိုက်ထိန်းပေးရင် ပိုမြန်မြန်သွားတယ်။ မထိန်းနိုင်ရင် အလယ်က သံတန်းနဲ့ဆောင့်မိပြီး အရှိန်နှေးသွားရော။ စထွက်ထွက်ချင်း ဘေးကကားက အရှိန်ပိုကောင်းနေတာ။ နောက်အကွေ့တွေ အများကြီးနေရာလဲရောက်ရော သံတန်းနဲ့ဆောင့်ပြီး ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ အိမ်ကြီးရှင်ကတော့ ဘယ်ဘက်ကွေ့ပြီး ညာဘက်ချက်ချင်းပြန်ကွေ့ရတဲ့ နေရာလောက်ဘဲ ဘေးချော်သွားတယ်။ ကျမကတော့ ဘေးကနေ "ဘယ်ကွေ့ ညာကွေ့ ဟုတ်ပြီကွ"လို့ လေနဲ့မောင်းလာတယ်။
Disneyland ထဲ အချိန်ကုန်ရတဲ့ အဓိကက တန်းစီနေရတာဘဲ။ ငါးမိနစ်၊ ဆယ်မိနစ် စီးခွင့်ရဖို့အရေး အနဲလေး နာရီဝက်ကနေ တစ်နာရီခွဲလောက်အထိ တန်းစီရတယ်။ တွက်ကြည့်လိုက်ရင် သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်က တန်းစီနေရတဲ့အချိန်ဘဲ။ မုန့်ဝယ်စားတဲ့နေရာတွေလဲ တန်းစီ။ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီးသန့်စင်ခန်းတွေမှာပါ တန်းစီရသေးတယ်။ အမျိုးသားတွေဘက်ကတော့ မတန်းစီရပါဘူး။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ လူအများကြီးတန်းစီနေတဲ့နေရာတွေရှောင်ပြီး ၁၅မိနစ်ဝန်းကျင်လောက် တန်းစီရတာတွေကိုဘဲ ဝင်ခဲ့တော့ သိပ်စုံအောင် မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတောင် မနက်၉နာရီကနေ ညနေ၇နာရီမှ ပြန်ခဲ့တာ။ ညဘက်ကျမှ မီးရောင်စုံနဲ့ Disneylandတခုလုံး ပိုလှနေတယ်။ ဝင်ကတည်းက ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်နေတာ နေရာစုံမရောက်ခင် memoryပြည့်သွားလို့ နောက်ပိုင်းပုံတွေ မရိုက်လိုက်ရဘူး။ တချို့အထဲဘက်တွေက ဓာတ်ပုံပေးမရိုက်တာတွေ ရှိတယ်။ အရှိန်နဲ့ လှုပ်ရင် ကင်မရာ ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့။
Disneyland က အဓိက ကလေးတွေအတွက်ပါ။ စီးစရာတွေလဲ ကလေးတွေခံနိုင်လောက်အောင် လုပ်ထားတယ်။ သရဲအိမ်ကလဲ ကြောက်ဖို့မကောင်းပါဘူး။ ဒါတောင်ဝင်ဝင်ချင်းမှာ အကဲပိုတဲ့မမတွေ အော်နေကြသေးတယ်။ သူတို့အော်သံကြောင့်ဘဲ လန့်သွားတာ။ Disneyland ထဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အဖွဲ့တွေ များတယ်။ နောက်တော့ ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုတွေ။ တချို့ဆို ကလေးပိစိကွေးလေးတွေ တွန်းလှဲထဲထည့်တွန်းပြီး ပတ်နေကြတယ်။ ကလေးတွေကတော့ အိပ်ပျော်လို့။ အိမ်ကကိုယ်တော်ကတော့ Disneyland ထဲက မုန့်ဆိုင်တွေဘဲလိုက်ရှာစားနေတယ်။ သူများတွေလက်ထဲမှာ မုန့်တွေ့ရင် အဲလိုဟာမျိုးလိုက်ရှာစားတော့တာဘဲ။ သူ့အဖို့ မုန့်ဆိုင်လိုက်ရှာစားဖို့ Disneyland လာရသလိုဘဲ။ တမျိုးပြီးတမျိုး တစွတ်စွတ်စားတော့တာဘဲ။ အိမ်ပြန်လာတော့မှသာ ရှာစားတာရပ်တော့တယ်။
နောက်တခါကျရင် Tokyo Disney Sea သွားဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ အဲဒီမှာက လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ စီးစရာတွေများတယ်လို့ ပြောတာဘဲ။ ပြောသာပြောတာပါ။ ဘယ်တော့သွားဖြစ်မယ်မှန်း မသိသေးဘူး။ သွားပြီးပြန်လာရင်လဲ ဘလော့ပေါ်ကထပ်ပျောက်ဦးမလားမသိ?? :P
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:42 PM
ဝေးး .. ဟေး .. ရေး .. ရောက်ဖူးပြီကွ. . .း) ကျေးဇူးပါ မမဝေ . .. ဖိနပ်ဝတ်ပေးနေတဲ့ အရုပ်လေး သဘောကျတယ် .. . နေကောင်းသွားပြီ ဟုတ် ?
မိုက်တယ်ဗျာ။ ပုံတွေ ကြည့်ရတာနဲ့တင် တော်တော် ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်။ မြရွက်ဝေ တယောက် မသောက်ဘဲ မူးပြီး ပြန်လာတယ်ပေါ့။ :)
မမြရွက်ဝေရေ...Tokyo Disneyland ကို
ို လိုက်ပို့ပေးတာ ကျေးဇူးပဲဗျို့။
လာလည်ရကျိုးနပ်တယ်ဗျာ. Disney Land ကို လိုက်ပို့ပေးလို့. :)
နောက်တစ်ခေါက် Disney Sea ကို သွား၇င်လည်း ခေါ်ဦးနော့. ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်.
ညီမလေး နေကောင်းသွားပြီလား.. ပျောက်နေတာကြာလို့ နေမကောင်းဘူးလား အလုပ်များနေလား၊ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲလို့တွေးနေတာ.. လာတော့ ကြည့်ဖြစ်တယ်.. ဂဏန်းသင်္ချာတွေကြောက်လို့ လှည့်ပြန်ပြေးနေလို့.. Disneyland ကို အမလည်း စိတ်ကုန်တယ်.. စောင့်ရတာကြာလို့.. golden week တုန်းကဆို ပြီးပါလေရော.. တစ်နေရာရာမှာ တန်းစီရတာ စိတ်မရှည်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ခြေထောက်တွေတောင့်ပြီးနေတာပဲ... အိမ်သာတက်ချင်ရင်လည်း တန်းစီရတာနဲ့ပဲ လူက တဒုက္ခ။ Disney Sea တော့ အမလည်း မရောက်ဖူးသေးဘူး.. ပြောသံကြားရတာ စုံတွဲတွေ အတော်များများလာကြတယ်ဆိုပဲ.. ညီမလေး သွားပြီး ပြန်လာရင်.. ဘာဖြစ်လို့ စုံတွဲတွေ လာတာများလည်း ဆိုတာ ပြောပြနော်.. :D :D
ခုတော့ ဆရာမပြထားတဲ့ ပုံတွေကြည်ပြီး...
တကယ်ရောက်သွားသလိုပဲ။ တစ်ပုံချင်းအသေးစိတ်ရှင်းထားတာ။ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲရောက်သွားတာ ကျေးဇူးအစ်မရေ။